Momba anay - Tianjin Tech mahatoky. Co., Ltd.
Tianjin Tech mahatoky. Co., Ltd.
Tianjin Tech mahatoky. Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2014, izay mpanamboatra matihanina sy mpanondrana izay miahiahy amin'ny famolavolana, fampandrosoana ary ny famokarana ny FIAROVANA VATANA, TOWELA ary Jiro LED. Any Tianjin no misy anay, izay iray amin'ireo seranan-tsambo lehibe indrindra any avaratr'i Sina. Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena ary ankafizinay indrindra amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao. Ny fotodrafitrasa misy fitaovana tsara sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-po ny mpanjifa.
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay amin'ny famokarana sy fitantanana ary fikarohana, Honest dia nanangana rafitra fitantanana kalitao manokana. Ny savily marina nandritra ny taona maro dia nifikitra hatrany tamin'ny "fametrahana olona eo an-tampony, mba hifampiraharaha am-pahatokisana amin'ny olona" tanjona ara-barotra. Manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy kalitao. Manàna ekipa mpitantana famolavolana matihanina sy manam-pahaizana, ho an'ny lafiny tsirairay sy ny fizotrany dia sedraina mafy sy hifehezana.
Vokatry ny vokatra avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka, nahazo tambajotram-barotra eran-tany izahay tonga tany Angletera, Amerika, Japon, Alemana, Espana, Italia, Suède, France ary Russia, sns.
Ny famokarana anay
Ny orinasantsika lehibe dia misy fiarovana ny Vatana, lamba famaohana ary jiro Led. Azonay omena anao ny fiorenan'ny lamosina, ny valahana, ny lohalika, ny kitrokeloka, ny famaohana lamba famaohana, ny lamba famaohana an-tsipiriany, ny lamba famaohana volo, ary ny jiro, labozia, jiro bisikileta, jiro mitsorika, sns. Ary raha tsy hitanao ireo vokatra izay mahaliana anao, azafady mifandraisa aminay, ary faly izahay manampy.
Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny lamina manokana, azafady mifandraisa aminay.